ကိုယ်ပိုင်ညနေခင်း….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ကိုယ်ပိုင်ညနေခင်း…..	3
Posted by Mr. Pocket on Oct 5, 2015 in Arts & Humanities |3comments
တေးသွား အပိုင်းအစ တစ်ချို့ရယ်…၊
အနှစ်သာရတွေ လျှံဝေစီးကျနေတဲ့ သင်္ခါရ သဘာဝ ရသ တစ်ချို့ရယ်…
ပေးဆပ်ခြင်းရဲ့နောက် တိုးလျှိူ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ရယူခြင်းအတ္တ အနုပညာတွေရယ်..
ညနေခင်းတစ်ချပ်ပေါ်ဝယ် လှလှပပ တည်ခင်းပြီး…
၀မ်းစာဖြည့်စားသုံးလိုက်တဲ့…နောက်…..အလင်းအစား အမှောင်ဝင်…..ညလယ်နှစ်ချိုက်အိပ်စက်ခဲ့…. သည်…… ။ ။
kai says: ညနေစာဝမ်းဖြည့်ကောင်းစားခဲ့သူတွေ
တွေးနေလို့တော့မရ.. ထွက်ကိုထွက်ရမယ့်.. လောကပါလ…သဘာဝ..။ ။
Mr. Pocket says: ဟုတ်ပဗျာသိပ်မှန်သပ… ကျွန်တော့်ကဗျာနောက်ဆုံးမှာ ဒီအပုဒ်လေးဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပ….
Alinsett @ Maung Thura says: တချို့သော မြန်မာစကားလုံး( အက္ခရာတွေ )ကို
.ဖတ် ဖတ်ပြီး ကျနော် ဖျားတယ်
တချို့ကိုတော့ ဖတ် ဖတ် မောတယ်